बच्चाहरुलाई स्वस्थ खानेकुरा खान कसरी सिकाउने ?
अहिले हरेक आमाबुबाले आफ्नो बच्चाले राम्रो खानेकुरा खाओस् भन्ने सोच्छन् । तर, राम्रो खानेकुरा उनीहरुले दैनिकजसो बच्चाहरुलाई खुवाउन भने सकेको पाइदैन् किनकि हरेकको जीवनशैली बदली रहेको छ।
सधैजसो बच्चाहरुलाई स्वस्थ खानेकुरा दिदापनि बच्चाहरुलाई त्यो मन नपर्न सक्छ । हरेक अभिभावले आफ्नो बच्चाले स्कुल लिएको टिफीन सकेर आएको हेर्न चाहन्छन् । बच्चालाई खान दिएको परिकार कति स्वस्थ र अस्वस्थ भने ध्यान दिएको पाइँदैन । यही कुरा नै बच्चाहरुलाई सिकाउनु पर्छ ।
‘फास्ट’ नहुन सक्छ खानेकुरा
यो समयमा तपाई बच्चालाई फास्ट फूडबाट हुने नोक्सान र पौष्टिक खानेकुरा फाइदाको बारेमा भन्नु जरुरी छ । तपाई बच्चाहरुलाई यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छ । जुन कुरा खानमा मिठो हुन्छ त्यो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक नहुनसक्छ । जुनकुरा स्वास्थ्यवद्र्धक छ त्यो मिठो नहुनसक्छ । त्यसैले बच्चाहरुलाई यो कुरा थाहा हुन जरुरी छ ।
सबैजनासँगै बसेर खाना खानुस्
खाना सबैसँगै बसेर खानुस् । खानाखाने समयमा टिभी नहेर्नुस् किनकी टिभी हेर्दा ध्यान अरु नै कुरा तिर केन्द्रीत हुन्छ । तपाई पनि खाना स्वस्थ खानुहोस् । तपाईले जे खानुहुन्छ त्यसले तपाईको बच्चामा पवनि प्रभाव पर्छ । त्यहि खानेकुरा किन्न बजार निस्कदा बच्चाहरुलाई पनि सँगै लिएर जानुहोस् ।
यसले उनीहरुमा सामाग्रीलाई लिएर रुची बढ्छ । यसले मात्र होइन उनीहरुलाई खाने बनाउने बेलामा साथमा राख्नुपनि हुन्छ । खानाबनाउन लाग्दा पोष्टीक खानेकुराको बारेमा ज्ञान बढ्छ । खाना खानुअघि बच्चाहरुलाई भोक लागे कुकीजहरु नदिएर फलफुलहरु खान दिनुस् ।
खाना बनाउनमा सहभागी गराउनुस्
खाना बनाउन राम्रो भाडाँ प्रयोग गर्नुस् । हल्ला फ्राइ गर्नुस् । यस्तो चिजको गुणस्तर कम गर्नुस् । जुन स्वस्थ हुदैनन् । गहुँको पास्ता तरकारीसँगै पकाउन सकिन्छ ।
यदि बच्चा फास्ट फुड खानका लागि जिद्दी गर्छ भने खुवाउनुस् तर, स्वस्थ खानेकुरा खान दिनुस् । मसलन बर्गरमा आलुसँगै अन्य तरकारीहरु पनि राख्नुस् । यसलाई तेलमा फ्राइ गर्नुस् र यसैगरी चाउचाउलाई पनि अन्य तरकारीमा पनि मिलाएर खानुस् ।
सेलेना गोमेज फेरी अस्वस्थ
काठमाडौँ। हलिवुड अभिनेत्री तथा गायिका सेलेना गोमेजको स्वास्थ्यमा फेरी समस्या भएको छ। गतबर्ष मात्र किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेकी गोमेजलाई अहिले लुपुस नामको रोग लागेको बताइएको छ। सो रोग लागेपछि गोमेज अस्पतालमा
काठमाडौँ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका साथै टाढाटाढा पुगेका आफन्त एकै स्थानमा भेट हुन, रमाइलो गर्न, सुखदुःख बाँड्न पाइने भएकाले दशैं कहिले आउला भनेर हामी दिन गनेर बसिरहेका हुन्छौं । हिन्दुमात्र नभई
बालबालिकालाई स्वस्थ कसरी राख्ने ?
काठमाडौं । बाल्यावस्था मानिसको जिन्दगीको सुरुवात हो । बाल्यावस्था पार गर्दै युवावस्था अनि वृद्धावस्था भएर मानिसको जिन्दगी पूर्ण हुन्छ । देश, समाज र परिवार स्वस्थ र बलियो हुन नागरिक अर्थात्
अभिनेता दिलिप कुमार अस्वस्थ, मुम्बईस्थित लीलावती अस्पतालमा भर्ना
मुम्बई। बलिवुडका ट्रेजडी किंगका नामले चर्चित अभिनेता दिलीप कुमारको स्वास्थ्य अचानक बिग्रिएपछि उनलाई मुंबईको लीलावती अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दिलिप कुमारको ट्वीटर ह्यान्डलबाट सो बारे जानकारी दिदै दिलिप कुमारलाई छातीमा इन्फेक्सन